China Elastic Fastener E2039 Rail Clip ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy rafitra fifadian-kanina | Lanling
Vidin'ny FOB: USD 0.88 ~ 0.95 / pcs
Lanja: 0.78kg / pcs
Fahaizana manome: 200,000 pcs / volana
ny clip elastika Mampiasa ny fanatanterahana fihenan-tsolika an-tsokosoko amin'ny fitaovana sy ny fampisehoana deformation torsional an'ny fitaovana (indrindra ny faritra boribory clip elastika), noho izany ny elastika dia tsara amin'ny ankapobeny, ary tsy misy fahalemena mihintsy amin'ny ankapobeny. Noho izany, avo ny tahan'ny fampiasana fitaovana. Amin'ny fizaran-tany mahazatra, antenaina amin'ny ankapobeny fa nyclip amin'ny lalambymanana tsindry avo sy elastika tsara. Amin'io lafiny io, ny clip elastika dia manana tombony mazava.
Teo aloha: Voninkazo elatra Fastener PR85 ho an'ny rafitra fifadian-kanina
Manaraka: Elastic Fastener E2063 Rail Clip ho an'ny rafitra fanamafisana ny lalamby
rafitra fifamatorana lalamby, clip amin'ny lalamby, mpamatsy lalamby, e2055, Gauge Lock Clip, clip elastika,